စပါး - မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ပွဲစဉ် သုံးသပ်ချက် | FOX Sports Myanmar
စပါး – မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ပွဲစဉ် သုံးသပ်ချက်
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်း ယာယီနည်းပြ ဆိုးလ်ရှားအတွက်တော့ ဒီနေ့မှာ ကစားရမယ့် စပါးအသင်းနဲ့ ပွဲစဉ်က ခက်ခဲတဲ့ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီရာသီခြေစွမ်းပြသနေတဲ့အသင်းတွေထဲမှာ တစ်သင်းအပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ စပါးအသင်းရဲ့ အိမ်ကွင်းကို သွားရောက်ပြီး ယှဉ်ပြုင်ကစားမယ့် ပွဲစဉ်ဖြစ်နေလို့ အားလုံးရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေကလည်း မြင့်တက်နေပါတယ်။
နည်းပြ ပွန်ချက်တီနိုရဲ့ စပါးအသင်းသားတွေကတော့ ချန်ပီယံဆုကို ရယူနိုင်ဖို့အတွက် ပစ်မှတ်ထားနေဆဲဖြစ်ပြီး မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ ထိပ်ဆုံးအသင်း (၄) သင်းနေရာအတွက် ပစ်မှတ်ထားနေခဲ့လို့ ဒီပွဲစဉ်က တကယ့်ကို စိတ်လှုပ်ရှားမှု ရသပေးစွမ်းနိုင်မယ့် ပွဲစဉ်ဖြစ်လာပါမယ်။
စပါးအသင်းဒီပွဲစဉ်ကို ဘယ်လောကတောင် ပစ်မှတ်ထားနေလဲဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့ကြားရက်က ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်တွေမှာ အသင်းရဲ့ပွဲထွက်ကစားသမားလူစာရင်းကနေ (၈) ဦးလောက်ကို အနားပေးထားခဲ့တာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။အသင်းမှာ ဒဏ်ရာခွဲစိတ်မှုခံနေရတဲ့ အဲရစ်ဒိုင်ရာကတော့ ဒီပွဲစဉ်ကို ကျိန်းသေပေါက်လွဲချော်မှာဖြစ်သလိုပဲ ပထမအကျော့က မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းဘက်ကို သွင်းဂိုး (၂) ဂိုးသွင်းယူခဲ့တဲ့ တောင်ပံကစားသမား လူးကပ်စ်မော်ရာလည်း ဒီပွဲစဉ်ကို ပါဝင်ဖို့မသေချာတဲ့ အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်း နောက်တန်းမှာ အဲရစ်ဘိုင်လီပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကြောင့် ပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်သလို စမောလင်း နဲ့ ရိုဂျိုကလည်း ဒဏ်ရာပြဿနာတွေရှိနေပါတယ်။ပေါ့ဘာကတော့ အသင်းရဲ့စခန်းသွင်းလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်မှာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာအသင်းနဲ့ ပူးပေါင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေကိုကြည့်ရင်တော့ စပါးအသင်းက မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းကို နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် (၃) ပွဲလုံးမှာ အနိုင်ရလဒ် ရယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
(၂၀၁၈) ဧပြီလတည်းက စပါးအသင်း သရေရလဒ်ထွက်ပေါ်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တာ ဒီရာသီမှာလည်း သရေရလဒ်တစ်ပွဲတည်းသာ ထွက်ပေါ်ထားခဲ့တဲ့အသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
စပါးအသင်းရဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ပွဲထွက်လူစာရင်း – Lloris, Trippier, Alderweireld, Sanchez, Rose, Sissoko, Winks, Eriksen, Alli, Son, and Kane.
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ပွဲထွက်လူစာရင်း – De Gea, Young, Lindelof, Jones, Shaw, Matic, Pogba, Herrera, Martial, Rashford, and Lingard
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်း အနိုင်ရရှိထားခဲ့တဲ့အသင်းတွေက အနိုင်ယူဖို့ လွယ်ကူတဲ့အသင်းတွေလို့ ဆိုခဲ့ကြပေမယ့် ဒီပွဲစဉ်တွေမှာ အနိုင်ရရှိခဲ့တာက ရလဒ်ပိုင်းမဟုတ်ပိုင်းပါဘူး အသင်းရဲ့ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းပါ။ပေါ့ဘာ ၊ ရှက်ဖို့ဒ် နဲ့ ဟာရဲယားတို့ရဲ့ ကစားကွက်တွေ ပိုပြီးတော့ လွတ်လပ်မှုတွေကို မြင်တွေ့နေရပြီး စပါးအသင်းအတွက်လည်း ပထမအကျော့ အဝေးကွင်းမှာ အနိုင်ယူထားခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ မတူညီတဲ့အသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာ လက်ခံကစားရမှာပါ။စပါးအသင်းရဲ့ အမှတ်ပေးဇယားရပ်တည်မှု နဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်း စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရင် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက် ခက်ခဲနိုင်မယ့် ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်လာဖို့ရှိနေခဲ့လို့ နှစ်သင်းအတွက် သရေဆိုတာက မျှတတဲ့ရလဒ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
မန်ခဵက်စတာ ယိူိုံက်တက်အသင်း ယာယီနည်ူးပ ဆိုးလ်ရြားအတက်ြတော့ ဒီနေႛမြာ ကစားရမယ့် စပၝးအသင်းနဲႛ ပြဲစဉ်က ခက်ခဲတဲ့ စမ်းသပ်မတြစ်ခုဖစ်လာဖိုႛရြိနေပၝတယ်။ဒီရာသီေူခစမြ်ူးပသနေတဲ့အသင်းတေထြဲမြာ တစ်သင်းအပၝအဝင်ူဖစ်တဲ့ စပၝးအသင်းရဲႚ အိမ်ကငြ်းကို သြားရောက်္ဘပီး ယဉ်္ဘြပင်ြကစားမယ့် ပြဲစဉ်ူဖစ်နေလိုႛ အားလုံးရဲႚ စိတ်ဝင်စားမတြေကြလည်ူးမင့်တက်နေပၝတယ်။
နည်ူးပ ပန်ြခဵက်တီိုံရဲႚ စပၝးအသင်းသားတေကြတော့ ခဵန်ပီယံဆုကို ရယိူိုံင်ဖိုႛအတကြ် ပစ်မတ်ြထားနေဆဲူဖစ်္ဘပီး မန်ခဵက်စတာ ယိူုိံက်တက်အသင်းကတော့ ထိပ်ဆုံးအသင်း (၄) သင်းနေရာအတကြ် ပစ်မတ်ြထားနေခဲ့လိုႛ ဒီပြဲစဉ်က တကယ့်ကို စိတ်လပ်ြရြားမြ ရသပေးစမြ်ိးိုံင်မယ့် ပြဲစဉ်ူဖစ်လာပၝမယ်။
စပၝးအသင်းဒီပြဲစဉ်ကို ဘယ်လောကတောင် ပစ်မတ်ြထားနေလဲဆိုရင်္ဘပီးခဲ့တဲု့ကားရက်က ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဉ်တေမြာ အသင်းရဲႚပြဲထက်ြကစားသမားလူစာရင်းကနေ (၈) ဦးလောက်ကို အနားပေးထားခဲ့တာကိုမင်တြေႚရမြာပၝ။အသင်းမြာ ဒဏ်ရာခြဲစိတ်မခြံနေရတဲ့ အဲရစ်ဒိုင်ရာကတော့ ဒီပြဲစဉ်ကို ကိဵန်းသေပေၝက်လြဲခေဵာ်မြာူဖစ်သလိုပဲ ပထမအကေဵာႛက မန်ခဵက်စတာ ယိူိုံက်တက်အသင်းဘက်ကို သငြ်းဂိုး (၂) ဂိုးသငြ်းယူခဲ့တဲ့ တောင်ပံကစားသမား လူးကပ်စ်မော်ရာလည်း ဒီပြဲစဉ်ကို ပၝဝင်ဖိုႛမသေခဵာတဲ့ အေူခအနေမြာရြိနေပၝတယ်။
မန်ခဵက်စတာ ယိူိုံက်တက်အသင်း နောက်တန်းမြာ အဲရစ်ဘိုင်လီပြဲပယ်ူပစ်ဒဏ်ေုကာင့် ပၝဝင်ိုံင်မြာမဟုတ်သလို စမောလင်း နဲႚ ရိုဂိဵကြလည်း ဒဏ်ရာူင်္ပံနာတေရြိနေပၝတယ်။ပေၝ့ဘာကတော့ အသင်းရဲႚစခန်းသငြ်းလေ့ကဵင့်ရေးအစီအစဉ်မြာ ကဵန်ရစ်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမြာအသင်းနဲႛ ပူးပေၝင်ိးိုံင်ခဲ့ပၝတယ်။ထိပ်တိုက်တြေႚဆုံမတြေကြိုကည့်ရင်တော့ စပၝးအသင်းက မန်ခဵက်စတာ ယိူိုံက်တက်အသင်းကို နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဉ် (၃) ပြဲလုံးမြာ အိုံင်ရလဒ် ရယူထာိးုိံင်ခဲ့ပၝတယ်။
(၂၀၁၈) ဧ္ဘပီလတည်းက စပၝးအသင်း သရေရလဒ်ထက်ြပေၞခဲူ့ခင်းမရြိခဲ့တာ ဒီရာသီမြာလည်း သရေရလဒ်တစ်ပြဲတည်းသာ ထက်ြပေၞထားခဲ့တဲ့အသင်းလည်ူးဖစ်ပၝတယ်။
စပၝးအသင်းရဲႚူဖစ်ိုံင်ဖယြ် ပြဲထက်ြလူစာရင်း – Lloris, Trippier, Alderweireld, Sanchez, Rose, Sissoko, Winks, Eriksen, Alli, Son, and Kane.
မန်ခဵက်စတာ ယိူိုံက်တက်အသင်းရဲႚူဖစ်ိုံင်ဖယ်ြပြဲထက်ြလူစာရင်း – De Gea, Young, Lindelof, Jones, Shaw, Matic, Pogba, Herrera, Martial, Rashford, and Lingard
မန်ခဵက်စတာ ယိူုိံက်တက်အသင်း အိုံင်ရရြိထားခဲ့တဲ့အသင်းတေကြ အိုံင်ယူဖိုႛ လယ်ြကူတဲ့အသင်းတေလြိုႛ ဆိုခဲု့ကပေမယ့် ဒီပြဲစဉ်တေမြာ အိုံင်ရရြိခဲ့တာက ရလဒ်ပိုင်းမဟုတ်ပိုင်းပၝဘူး အသင်းရဲႚပေဵာက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့ စိတ်ဓၝတ်ပိုင်းပၝ။ပေၝ့ဘာ ၊ ရက်ြဖိုႛဒ် နဲႛ ဟာရဲယားတိုႛရဲႚ ကစားကက်ြတြေ ပ္ဘိုပီးတော့ လတ်ြလပ်မတြေကြိုမင်တြေႚနေရ္ဘပီး စပၝးအသင်းအတက်ြလည်း ပထမအကေဵာ့ အဝေးကငြ်းမြာ အိုံင်ယူထားခဲ့တဲ့ မန်ခဵက်စတာ ယိူိုံက်တက်အသင်းနဲႛ မတူညီတဲ့အသင်းကို အိမ်ကငြ်းမြာ လက်ခံကစားရမြာပၝ။စပၝးအသင်းရဲႚ အမတ်ြပေးဇယားရပ်တည်မြ နဲႛ တိုက်စစ်ပိုင်း စမြ်းဆောင်ရည်တေကြို ထည့်သငြ်းတက်ြခဵက်ရင် မန်ခဵက်စတာ ယိူိုံက်တက်အသင်းအတကြ် ခက်ခဲိုိံင်မယ့် ပြဲစဉ်တစ်ပြဲူဖစ်လာဖိုႛရြိနေခဲ့လိုႛိံစ်ြသင်းအတကြ် သရေဆိုတာက မ္တွတတဲ့ရလဒ်လိုႛ ဆိုရမြာပၝ။
Home Football Premier League စပါး – မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ပွဲစဉ် သုံးသပ်ချက်